26 ţine Poly ရွက်ထွန်ခြစ် Tools များ - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: 26T
ယေဘုယျအား Length: 170cm
ကိုင်တွယ်: အချင်း 24mm Powder coated သံမဏိလက်ကိုင်
ဒါက ဥယျာဉ်ပလတ်စတစ် အရွက်ထွန်ခြစ် ပေါ့ပါးသည်နှင့် durable.The သံမဏိပလတ်စတစ်ရွက်ထွန်ခြစ်ကိုင်တွယ် ribbed ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူအများဆုံးထွန်ခြစ်စွမ်းရည်များအတွက် 24 "ထွန်ခြစ်ခေါင်းကိုအပိုဆောင်းကျောမှုနှင့်ခွန်အားပေးပါသည်။ ဒါဟာ ပလတ်စတစ်ရွက်ထွန်ခြစ် အရွက်နှင့်အခြားခြံလျော့၏ကြီးမားသောအရေအတွက် raking များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သိမ့်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအဘို့, ကူချုပ်ကိုင်လက်ကိုင်။
ဥယျာဉ်တော် Tools များ 26 သွားပလတ်စတစ်ရွက်ထွန်ခြစ်
တာရှည်ခံအဘို့အသံမဏိလက်ကိုင်နှင့်အတူ Poly ရွက်ထွန်ခြစ်,
အချင်းသံချေးခုခံဘို့အမှုန့် coated မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ 24mm ဖြစ်ပါသည်ကိုင်တွယ်။
Poly ရွက်ထွန်ခြစ်အရွယ်အစား: 615 * H540mm W က
စံပြရှာဖွေနေ ဥယျာဉ်ထွန်ခြစ် Tools များထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း? ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်ပလတ်စတစ်ရွက်ထွန်ခြစ်အရည်အသွေးကိုအာမခံနေကြသည်။ ကျနော်တို့ဥယျာဉ်၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံ Walmart ပိုဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
Stainles သံမဏိနှင့်အတူဥယျာဉ်တော်လက် Tools များမီးသီးစိုက်ပျိုး